12 ကမ္ဘာတစ်လွှားမှရှောင်ရှားရန်အဓိကခရီးသွားလိမ်လည်မှု | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားသိကောင်းစရာများ > 12 ကမ္ဘာတစ်လွှားမှရှောင်ရှားရန်အဓိကခရီးသွားလိမ်လည်မှု
ကမ္ဘာကြီးသည်လှပသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်, သို့သော်ပထမဆုံးအကြိမ်ခရီးသွားများသည်ခရီးသွား tr ည့်ကျောင်များထဲသို့ကျပြီးအဓိကခရီးသွားလိမ်လည်မှုများ၏သားကောင်များဖြစ်လာနိုင်သည်. ဤများမှာ 12 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှရှောင်ရှားရန်အဓိကခရီးသွားလိမ်လည်မှု; ဥရောပကနေတရုတ်အထိ, နှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြား.
1. ကမ္ဘာတစ်လွှားမှရှောင်ရှားရန်ခရီးသွားလိမ်လည်မှု: အဆိုပါတက္ကစီ Overcharge - လမ်းလွှဲ
အကြီးစားအသွားအလာ, တက္ကစီမောင်းကမြို့ပုံပြင်တွေကိုပြောပြတယ်, နှင့်ပြတင်းပေါက်ကနေအမြင်အသစ်ကတက္ကစီ overcharge ခရီးသွားလိမ်လည်မှုသို့ကျရန်အလွန်လွယ်ကူစေသည်.
တက္ကစီဖြင့်သွားခြင်းသည်ခရီးသွား as ည့်သည်အနေနှင့်အဆင်ပြေဆုံးခရီးသွားနည်းဖြစ်သည်, သို့သော်၎င်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အဓိကခရီးသွားလိမ်လည်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်. ခရီးသွားည့်သည်တစ်ယောက်အနေဖြင့်လေဆိပ်မှဟိုတယ်အထိအမြန်ဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းကိုသင်မသိပါ, သို့မဟုတ်တ ဦး တည်းဆွဲဆောင်မှုကနေအခြားရန်, ဒါကြောင့်အငှားယာဉ်မောင်းသည်သင့်ကိုယ်စားကျင်းပနိုင်ပြီးဒေါသကြီးသောနှုန်းထားကိုတောင်းခံနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင့်အားလမ်းလျှောက်ထွက်သွားနိုင်သည်, မပိုကြာရှည်သင့်ကြောင်းခရီးစဉ်သည် 15 ငါ့ကို.
Taxi Overcharge ကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားမလဲ?
သင်၏အတွက်လက်ခံထားသောတက္ကစီနှုန်းအတွက်ကြိုတင်လေ့လာပါ ခရီးသွားဦးတည်ရာ. ထို့အပြင်, မင်းမှာမြေပုံကောင်း app တစ်ခုသေချာအောင်လုပ်ပါ, ကြောင်း Wi-Fi ကိုမလိုအပ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်သင်လမ်းကြောင်းကိုအချိန်တိုင်းစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်, နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ယုံကြည်စိတ်ချရသောတက္ကစီကုမ္ပဏီကိုရွေးချယ်ပါ, သို့မဟုတ်ရထားဖြင့်ခရီးသွားလာ.
2. သင့်အဝတ်အစားများပေါ်တွင်သွန်းလောင်းခြင်း - ခိုလှည့်စားခြင်း
သင်အာဂျင်တီးနားကိုသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်, ဥပမာ, သင်၏အဝတ်ခရီးသွားလိမ်လည်မှုတွင်ခိုယိုဖိတ်မှုသတိထားသင့်သည်. ဤခရီးသွားလိမ်လည်မှုသည် Buenos Aires တွင်လူကြိုက်များသည်, တစ် ဦး ခင်မင်ရင်းနှီးဒေသခံလာသောအခါသင်ချဉ်းကပ်, မင်းရဲ့အဝတ်တွေပေါ်မှာယိုဖိတ်မှုဖြစ်လို့ကူညီချင်တယ်.
သငျသညျမွို့၏ဗဟိုကိုလေးစားသလား၊, လှည့်ပတ်ကြည့်ရှု, ရုတ်တရက်ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့သူစိမ်းတစ်ယောက်ပေါ်လာတယ်, မင်းရဲ့အဝတ်တွေအားလုံးမှာယိုဖိတ်နေတယ်ဆိုတာမင်းကိုအသိပေးခြင်း. အိတ်ကိုမြေပေါ်မှာတင်ထားပြီးလျှင်၊, ယိုဖိတ်မှုအတွက်အံ့အားသင့်မှုပတ်ပတ်လည်တွင်ကြည့်ပါ, ထိုအတောအတွင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်, ပိုက်ဆံအိတ်, အဘိုးထိုက်သောဘဏ္goneာအမျိုးမျိုးကိုတွေ့။ ၊.
ဒေသခံတစ် ဦး ကဲ့သို့စူးစမ်း, သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိထားပါ, နှင့်သင်၏မျက်စိရှေ့ဆက်စောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစားပါ.
3. ကမ္ဘာတစ်လွှားမှရှောင်ရှားရန်ခရီးသွားလိမ်လည်မှု: အဆိုပါ ATM စက်များခရီးသွားလိမ်လည်မှု
ငွေကကမ္ဘာကြီးကိုလည်ပတ်စေသည်, ဒါကြောင့်သိသာထင်ရှားစွာကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးခရီးသွားလိမ်လည်မှုများထဲမှပိုက်ဆံပါဝငျသညျ. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်အကြီးမားဆုံးခရီးသွားလိမ်လည်မှုတစ်ခုမှာဖြုတ်နိုင်သောခရက်ဒစ်ကဒ်ဖတ်စက်သည်သင်၏အထောက်အထားများကိုကူးယူပြီးနောက်သင်၏လက်ကျန်ငွေအားလုံးကိုရှင်းထုတ်ရန်အသုံးပြုသော ATM စက်များဖြစ်သည်။.
ဒါလုံးဝလိုအပ်မယ်ဆိုရင်, ကြီးမားသောလူသိများသော ATM ဘဏ်မှငွေထုတ်ယူခြင်း. တွင် ဥရောပရှိအဓိကဘဏ်များ, လုံခြုံရေးရှိတယ်, ထို့ကြောင့် ATM ကတ်ဖတ်စက်များ ၀ င်ရန်အခွင့်အလမ်းသည်သုညနှင့်နီးသည်.
4. Bump နှင့်ဆုပ်ကိုင်
ကမ္ဘာပေါ်ရှိဂန္ထဝင်ခရီးသွားလိမ်လည်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်, အဆိုပါဝင်တိုးနှင့်ဆုပ်ကိုင်အပေါ်လူကြိုက်များကြသည် အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, နှင့်အထင်ကရအဆောက်အ ဦ ၌တည်၏. သင်ရထားပေါ်မှာရှိနေတယ်, မက်ထရို, (သို့) ရုတ်တရက်တစ်စုံတစ် ဦး ကသင့်အားရုတ်တရက်မတော်တဆထိမိသောအခါနာမည်ကျော်နာရီကို Prague ရင်ပြင်၌စောင့်နေသည်.
ဒါကြောင့်မတော်တဆမှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်နေစဉ်, ကစီစဉ်ထား pickpocketing ဝင်တိုး -In ဖြစ်ပိုမိုဖွယ်ရှိသည်. ဒါဟာတစ်စက္ကန့်၏အုပ်စုခွဲနိုင်ပါတယ်, တစ်ဦး “တောင်းပန်ပါတယ်”, နှင့်သင်၏ပိုက်ဆံအိတ်, စောင့်နေ, သို့မဟုတ်လက်ဝတ်ရတနာသွားပြီ. အဆိုပါထုရိုက်နှင့်ဖမ်းပြီးလိမ်လည်မှုသည့်အခါသတိထားရရန်အရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည် ဥရောပတိုက်တွင်ခရီးသွားလာ.
Bump And Grab ကိုရှောင်ရှားနည်း?
အဖိုးတန်ပစ္စည်းများကိုဟိုတယ်အခန်းတွင်ထားခဲ့ပါ, သင်နှင့်အတူယူသွားသမျှကိုဖြန့်ဝေ: ဥပမာအားဖြင့်တစ် ဦး ပြည်တွင်းရေးဂျာကင်အင်္ကျီအိတ်ကပ်ထဲမှာပိုက်ဆံအိတ်.
5. ကမ္ဘာတစ်လွှားမှရှောင်ရှားရန်ခရီးသွားလိမ်လည်မှု: အဆိုပါ Swarm
အဆိုပါပြန်တယ်နှင့်ဆုပ်ကိုင်ဆင်တူသည်, အဆိုပါ swarm လိမ်လည်မှု, သင်ရုတ်တရက်သူစိမ်းအုပ်စုတစ်စုကလူစည်ကားသောအခါဖြစ်ပါတယ်, ကောင်းစွာသင်တို့ကိုသူစိမ်းကြည့်ရှုပါ. တကယ်တော့, ဒီသူစိမ်းတွေကိုတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သိပ်သိကြတယ်, နှင့်လှလှပပထူးဆန်းတဲ့တှေ့ဆုံစီစဉ်ခဲ့သည်, သို့မဟုတ် swarm. ဤနည်းသည်လုံးဝအပြစ်မဲ့ပုံရ, သင်ဝိုင်းရံခြင်းနှင့် pickpocketed နေကြသည်နေစဉ်.
ဤသည်မှာများသောအားဖြင့်လူစည်ကားသောနေရာတွင်ဖြစ်လေ့ရှိသည်, ဘယ်မှာဒီအုပ်စုလူအစုအဝေးနှင့်ပရမ်းပတာနှင့်အတူရောနှောနေခြင်း. သူတို့သည်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်သို့စတင်ရွေ့လျားလာပြီးအခြားသူများကအရာရာတိုင်းကိုသိမ်းယူသကဲ့သို့သင့်ကိုအမှန်တကယ်အာရုံပျံ့လွင့်စေနိုင်သည်. သင်၏ငွေကိုတစ်နေရာတည်းတွင်ထားခြင်းသည်တစ်ခုဖြစ်သည် 10 သင်ဥရောပ၌ရှောင်ရှားသင့်တယ်ခရီးသွားအမှားတွေ.
အဆိုပါ Swarm Scam ကိုရှောင်ရှားရန်?
ရိုးရှင်းစွာသောလူအစုအဝေးမှဝေးစောင့်ရှောက်လော့, နှင့်သင်၏အင်္ကျီ zip, သို့မဟုတ်သင်၏ပစ္စည်းများကိုကြည့်ရှုပါ, ဖြစ်နိုင်ရင်, အိတ်တစ်လုံးကိုမင်းရှေ့မှာထားပါ.
6. အဆိုပါ Friendly ဒေသခံ
လှပပြီးဖော်ရွေသောလူစိမ်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ထင်ရှားသောခရီးသွားလိမ်လည်မှုဖြစ်သည်. Red Square သို့မဟုတ် Paris မှာလမ်းလျှောက်နေလား, Eiffel Tower သို့ရောက်ရှိရန် (သို့) မြို့ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ကောင်းမွန်သောအချိန်ကိုပြသရန်သင့်တော်သောဒေသခံလူထုသည်သူတို့၏အကူအညီကိုအမြဲပေးလိမ့်မည်.
ထို့အပြင်, သူတို့ကပတ်ပတ်လည်အကြီးအကလပ်အားလုံးကိုပြသနိုင်အောင်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်, နောက်လာမယ့်မနက်မှာမင်းလိမ်ညာမှုကိုသာခံရလိမ့်မယ်, နှိုးထ, နှင့်သင်၏ငွေကိုသတိပွုအားလုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်. ထို့ကြောင့်, ဥပမာအားဖြင့်တစ်ကိုယ်တော်ခရီးစဉ်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိဒေသခံများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ထူးခြားသောအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်ဒါကသင့်ရဲ့အဆိုးဆုံးအိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်.
သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်အပေါ်ဒေသခံများအစည်းအဝေးကြီးလှ၏, နှင့်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံများကိုတ. သို့သျောလညျး, သင်ယုံကြည်တဲ့သူကိုသတိထားပါ, နှင့်အတူညဖြုန်းနေကြတယ်. ထူးဆန်းတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာစွန့်စားမှုတစ်ခုကလျင်မြန်စွာဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်စေနိုင်တယ်, ဒါကြောင့်သတိထားပါ.
7. ကမ္ဘာတစ်လွှားမှရှောင်ရှားရန်ခရီးသွားလိမ်လည်မှု: လက်ကောက် Scam
အခမဲ့ တိုင်းတစ်ပါးမှအမှတ်တရပစ္စည်းများ အံ့သြဖွယ်အသံ, ဒါပေမယ့်ငါတို့နထေိုငျကမ်ဘာပျေါတှငျတကယ်အခမဲ့အမှုအရာရှိပါသည်. ထိုကွောငျ့, များသောအားဖြင့်မင်းပြုံးနေသည့်ဒေသခံအမျိုးသမီးတစ် ဦး ပါ ၀ င်သောလက်ကောက်ကလိမ်လည်ခြင်းအတွက်မကျပါနှင့်, သင်၏လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်တွင်လက်ကောက်ထည့်ရန်.
အပြုံးနဲ့ဖော်ရွေ, သူတို့ကသင့်ကိုအိမ်သို့ယူရန်စစ်မှန်သောလက်ကောက်သို့မဟုတ်လည်ဆွဲများကိုပေးလိမ့်မည်, လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်သူတို့၏အခြားလက်သည်သင်၏ပိုက်ဆံအိတ်သို့ရောက်ရှိနေစဉ်, နှင့်လက်ဝတ်ရတနာ. လှပပြီးအခမဲ့သောအရာတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းခြင်းသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာဖြစ်ပြီးအပြစ်မဲ့သည့်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များစွာအတွက်အလုပ်လုပ်သည်.
လက်ကောက် Scam ကိုဘယ်လိုရှောင်ကြဉ်ရမလဲ?
အခမဲ့အမှတ်တရပစ္စည်းများအတွက်မကျပါနဲ့, မျက်လုံးကိုသာဖွင့်ထားပါ, နှင့်သူစိမ်းများထံမှအခမဲ့ပေးဆပ်မှုကိုလက်ခံရန်ကြင်နာစွာငြင်းဆိုသည်.
ငြိုငြင်အဝတ်ကိုဝတ်ဆင်, ညစ်ပတ်တယ်, ပိုက်ဆံသို့မဟုတ်အစားအစာအတွက်တောင်းစား, သူတောင်းစားကလေးသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကြေကွဲဖွယ်ခရီးသွားလိမ်လည်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်. ဥရောပကနေတရုတ်အထိ, လမ်းဘေးတွင်ကလေးများရှိနေသည်, ဗဟိုရင်ပြင်တစ်ဒေါ်လာစျေးသီဆို, သို့မဟုတ်တက္ကစီပြတင်းပေါက်သို့အသာပုတ်ပါ.
များသောအားဖြင့်ဤကလေးများသည်သူတို့ထင်သလောက်မပျောက်ပါ, ဒါပေမယ့်အခန်းကဏ္ play မှစေလွှတ်ခဲ့သည်. သိသာထင်ရှားတယ်, တကယ်တော့အစာနှင့်အကူအညီလိုအပ်နေသောကလေးများရှိသည်.
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာဆင်းရဲတဲ့ကလေးတွေနဲ့ပြည့်နေလို့တောင်းပန်ဖို့ကလွဲလို့တခြားရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိဘူး. သို့သျောလညျး, သင်သည်အခြားနည်းလမ်းဖြင့်သူတို့ကိုအစာစားရန်သို့မဟုတ်အကူအညီပေးရန်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်, ပိုက်ဆံပေးခြင်းအားဖြင့်ထက်. ဒီလမ်း, သင်သည်သူတို့၏တုံ့ပြန်မှုကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်, သူတို့တကယ်လိုအပ်သို့မဟုတ်ခရီးသွား’s ည့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ပြီးနောက်လျှင်.
9. ကမ္ဘာတစ်လွှားမှရှောင်ရှားရန်ခရီးသွားလိမ်လည်မှု: ဆွဲဆောင်မှုပိတ်ထားသည်
အဖွင့်နာရီတွေကိုကြိုတင်စစ်ဆေးခဲ့တယ်, သို့သော်သင်သည်ဗိမာန်တော်သို့ရောက်သောအခါသို့မဟုတ်ဈေးဝယ်သည့်အခါဒေသခံတစ် ဦး က၎င်းအားပိတ်ထားသည်ဟုသင်ပြောသောအခါအံ့သြသွားသည်. ထိုအခါ, သူတို့သည်သင်၏စိတ်ပျက်မိကြောင်းမြင်သောအခါ, သူတို့သည်သင့်အားအခြားထူးခြားသည့်အထင်ကရနေရာသို့မဟုတ်ဈေးဆိုင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားရန်ကမ်းလှမ်းသည်, တံခါးပိတ်ထက်သာ။ ကောင်း၏.
ဒေသခံများကအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစွန့်စားမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကမင်းကိုတကယ်ပဲအမြတ်ထုတ်နေကြတယ်, တစ်စျေးအလွန်အကျွံဝင်ပေါက်အခကြေးငွေတောင်းသည်, သို့မဟုတ်သူတို့တစ်တွေအဆီကော်မရှင်ရဘယ်မှာသင်စျေးဝယ်ယူပြီး.
လာရောက်လည်ပတ် ချွတ် -The- ရိုက်နှက် - လမ်းကြောင်းသောနေရာများ အရမ်းကောင်းတယ်, ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အခြားနည်းလမ်းများရှိပါကသေချာစစ်ဆေးပါ. ဖြည့်စွက်ကာ, ဥရောပသို့သွားရန်အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများအတွက်ကြိုတင်သုတေသနပြုပါ. ဆွဲဆောင်မှုအခမဲ့လျှင်, ထို့နောက်၎င်းကိုအလွန်အကျွံစျေးနှုန်းဖြင့်အစားထိုးရန်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ, ကြီးမြတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အတူစျေးဆိုင်များအတွက်နှင့်အတူတူပင်.
တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားခြင်းသည်အံ့သြစရာကောင်းသည်, နှင့်နောင်တရအပြည့်အဝအချိန်များတွင်ပြီးပြည့်စုံသောလူမှုမီဒီယာပုံဖော်လုပ်ရန်သင်တို့နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမ. နောက်ကွယ်ရှိ Big Ben သို့မဟုတ် Firenze, you look around and then they come up to you offering to take an amazing picture, ကြီးစွာသောထောင့်ကနေ.
2 စက္ကန့်ပိုင်းအကြာတွင်သင်၏ကင်မရာနှင့်အလွန်ကောင်းသောဓါတ်ပုံများပျောက်ကွယ်သွားသည်, ချစ်စရာသူစိမ်းသူတို့နှင့်အတူပြေးလေ၏. ကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာမဆိုဖြစ်ပျက်နိုင်တယ်, ဘယ်သူ့ကိုမဆို, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်အလေးသာဘာတွေလုပ်နေလဲ? ဒါပေမယ့်လုပ်ပါတယ်.
အခြားခရီးသွား for ည့်ရှာဖွေပါ, ဖြစ်ကောင်းတစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားများအတွက်အဖြစ်ကောင်းစွာ, သို့မဟုတ်စုံတွဲများ. ၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောရုပ်ပုံရရှိရန်နှင့်ကင်မရာကိုထိန်းသိမ်းရန်အလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်, နှင့်လဲလှယ်အတွက်, သူတို့ရဲ့ပုံကိုယူဖို့ကမ်းလှမ်း.
11. ကမ္ဘာတစ်လွှားမှရှောင်ရှားရန်ခရီးသွားလိမ်လည်မှု: Switcheroo
ခရီးသွားတဲ့အခါငွေကိုကိုင်တွယ်တဲ့အကောင်းဆုံးနည်းကငွေတောင်းခံလွှာသေးသေးလေးတွေအမြဲရှိဖို့ပါ. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, ကြီးမားတဲ့ဥပဒေကြမ်းများနှင့်အတူသတိထားပါ, တက္ကစီဒရိုင်ဘာကိုပေးဆောင်သည့်အခါသို့မဟုတ်ဒေသခံစားသောက်ဆိုင်များတွင်. သင်ငွေသေးငယ်တဲ့အတွက်ကြီးမားတဲ့ငွေတောင်းခံမှုကိုသင်ပေးနေနိုင်တယ်, ဒါပေမယ့်လက်ခံသူကကြီးမားတဲ့ငွေတောင်းခံမှုကိုလျှော့ချပြီးငွေနည်းနည်းပဲပေးလိုက်ပါလိမ့်မယ်. ဒီလမ်း, သူတို့ကခရီးသွား short ည့်ပြောင်းလဲ.
ငွေကိုင်, အငှားယာဉ်မောင်း, သို့မဟုတ်စားပွဲထိုးများ, ဒီ switcheroo လိမ်လည်မှုအတွက်ကစားသမားနိုင်ပါတယ်. မင်းဒီမှာအရှုံးသမားကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်, သတိမရှိဘူးဆိုရင်.
12. ကမ္ဘာတစ်လွှားမှရှောင်ရှားရန်အဓိကခရီးသွားလိမ်လည်မှု: အင်္ဂလိပ်စာကျောင်းသားများ
သူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုကျိုးနေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုသင်ပေးပါလို့တောင်းပန်တယ်. စိတ်အားထက်သန်သောအင်္ဂလိပ်ကျောင်းသားများသည်ကဖေးများနှင့်အရက်ဆိုင်များတွင်စောင့်နေကြသည်, သင်နှင့်အတူခင်မင်ရင်းနှီးစကားပြောဆိုမှုစတင်ပါလိမ့်မယ်, ထို့နောက်သင်၏ဟိုတယ်အခန်းတွင်အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာယူပါ.
တစ်ခါဟိုတယ်မှာ, စိတ်အားထက်သန်သောအင်္ဂလိပ်ကျောင်းသားသည် nightcap အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်, ပြီးတော့သင်ကအခိုးခံရတဲ့ပိုက်ဆံအိတ်နဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုနှိုးလိုက်တယ်. အမှန်တရားမှာဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုကိုတစ်ညလုံးတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ, တစ်ယောက်ယောက်ကလည်းသူတို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့ကျင့်ချင်တယ်, ဒီသင်ခန်းစာဟိုတယ်အခန်းထဲမှာသို့မဟုတ်အရက်ကျော်ဖြစ်ပျက်ရန်မလိုအပ်ပါ.
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်, စမတ်ခရီးသွားခြင်းသည်ယနေ့ခေတ်တွင်အကောင်းဆုံးခရီးသွားခြင်းဖြစ်သည်, နေရာတိုင်းမှာကမ္ဘာ. အကြောင်းပြချက်မှာခရီးသွားလိမ်လည်မှုသည်ဖော်ထုတ်ရန် ပို၍ ခက်ခဲပြီးခက်ခဲစေသည်. ဒါကဆိုပါတယ်ခံရ, ယနေ့ခေတ်ထက်ကမ္ဘာအနှံ့သွားလာရန်လွယ်ကူခြင်းမရှိခဲ့ပါ.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ခရီးသွားအယောင်ဆောင်မှုများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့်မင်းရဲ့ပျော်ရွှင်စရာနေရာတွေကိုစီစဉ်ပြီးပျော်ရွှင်စွာခရီးကိုပြီးမြောက်အောင်ကူညီဖို့ငါတို့ပျော်ရွှင်လိမ့်မယ်.
သင်၏ဘလော့ဂ်ကို“ ကမ္ဘာအနှံ့မှရှောင်ကြဉ်ရန်အဓိကခရီးသွားလိမ်လည်မှု ၁၂ ခု” ကိုသင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်သင်တင်လိုပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmy%2Ftravel-scams-avoid-worldwide%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)